मन्त्रिपरिषद्ले थपेन म्याद, विभागका महानिर्देशक डा. प्याकुरेलले पाए अवकाश – Nepali Health
मन्त्रिपरिषद्ले थपेन म्याद, विभागका महानिर्देशक डा. प्याकुरेलले पाए अवकाश
२०७६ भदौ २३ गते १०:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २२ भदौ । एक बर्ष म्याद थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा सुशीलनाथ प्याकुरेलले आइतबारबाट अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।
दुई साता अघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यले डा. प्याकुरेलको एक बर्ष म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
प्रमुख विशेषज्ञ (१२ औँ तह) का डा प्याकुरेलको ६० वर्षे अवधी आइतबार (हिजो) पुरा भएको थियो ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले डा प्याकुरेलको म्याद थप नभएको पुष्टी गरे । ‘हामीले त प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर त्यो मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन । त्यसैले उहाँले अवकाश पाउनुभयो सायद,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ४५ को उपदफा २ अनुसार उनको पदावधी थप गर्न प्रस्ताव गरिएको बताएको थियो ।
तर, मन्त्रालयको यो प्रस्ताव पठाउँदै समेत चिकित्सा बृत्तमै विरोध भएको थियो ।
‘महानिर्देशक पदका लागि भन्दा पनि विशेषज्ञ पदका लागि यो व्यवस्था थियो । र सुशीले विशेषज्ञ पनि होइनन र म्याद थपेर महानिर्देशकमा बस्न त झनै मिल्ने थिएन । धन्न निर्णय गरिएन । नत्र झनै विवादित हुने थियो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
म्याद थप नभएपछि डा प्याकुरेल आइतबारबाट नै विभाग आउन छाडेका छन् ।
४ हजार ५० जना हेल्थ असिस्टेन्टको समायोजन सम्पन्न, पत्र पठाइयो कार्यक्षेत्रमा